May 2019 – ရခိုင်ပြည်နယ် လွတ်တော်
ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစံကျော်လှ အား တူရကီနိုင်ငံသံအမတ် H.E. Mr Kerem DivanLioglus နှင့်အဖွဲ့လာရောက်တွေ့ဆ
ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစံကျော်လှအား တူရကီ နိုင်ငံသံ အမတ် H.E. Mr Kerem DivanLioglus နှင့်အဖွဲ့သည် ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ရက် မွန်းလွဲ ၂နာရီက ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံး ဥက္ကဋ္ဌ ဧည့်ခန်းမသို့ လာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ ယင်းသို့တွေ့ဆုံစဉ် တစ်ဖက်နိုင်ငံတွင်ရောက်ရှိနေသည့် နေရပ်စွန့်ခွါသူများအား ပြန်လည်ဝင်ရောက်မည့်ကိစ္စရပ်များတွင် ကြုံတွေ့နေရသောစိန်ခေါ်မှုများ၊ နိုင်ငံသားဖြစ်မှုဆိုင်ရာ တောင်းဆိုနေမှုများ၊ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသူများကြားထဲတွင် အကြမ်းဘက်သမားများ ပါဝင်လာပြီး ဒေသတွင်မတည်မငြိမ်ဖြစ်ပွါးလာနိုင်သည့်အခြေအနေနှင့် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ၏ စိုးရိမ်ပူပန်နေမှုများ၊ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ နှင့်ပါတ်သတ်ပြီး နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံချင်း၏ သဘောထားအမြင်နှင့် ရပ်တည်မှုကွာဟချက်များနှင့်ပါတ်သတ်ပြီး ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ တွေ့ဆုံပွဲသို့ ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစံကျော်လှနှင့်အတူ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးမြသန်း၊ ရသေ့တောင်မြိုကနယ်မဲဆန္ဒနယ်မှ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဦးသန်းနိုင်တို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး တူရကီနိုင်ငံသံအမတ် နှင့်အတူ ဒုတိယသံအမတ် Mr. Eymen Ozsahin IKA မှ ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်
Posted on May 29, 2019 January 10, 2020 Author admin	67 Views
ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအား လက္ကာကျေးရွာမှ ဒေသခံများနှင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းမှ တာဝန်ရှိသူများလာရောက်တွေ့ဆုံ
ရခိုင်ပြည်နယ်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစံကျော်လှအား မြောက်ဦးမြို့နယ် လက္ကာကျေးရွာမှ မသင်္ကာမှုဖြင့် ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခြင်းခံခဲ့ရသူများ၏ မိသားစုဝင်များနှင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ချို့မှ တာဝန်ရှိသူများသည် ဧပြီလ ၂၅ ရက် မနက်ပိုင်းက ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံး လာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ တွေ့ဆုံရာတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးမြသန်း၊မြောက်ဦးမြို့နယ်မှ ပြည်သူလွှတ်တော် တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဦးလှစော ၊မြောက်ဦးမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)မှ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးထွန်းသာစိန်တို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခြင်းခံရသူများ၏ မိသားစုဝင်များက ဖမ်းဆီးခြင်း ခံရသူများနှင့် တွေ့ဆုံလိုသည့် ကိစ္စ၊အပြစ်မရှိသူများ ကိုပြန်လွှတ်ပေးမည့်ကိစ္စ၊ ဖမ်းဆီးခြင့်ခံထားရစဉ် အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် သေဆုံးသွားသူများ၏ ရုပ်အလောင်းများအား မိသားစု ထံပြန်လည် အပ်နှံနိုင်ရေး ကိစ္စ၊ကျေးရွာတွင်းလက်ရှိဖြစ်ပွါးနေသောအခြေအနေများနှင့်ပတ်သတ်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ် လွှတ်တော်အနေဖြင့် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရေး၊များကို တင်ပြအကူအညီတောင်းခံခဲ့ကြသည်။ လက္ကာကျေးရွာဒေသခံများ၏ အကူအညီတောင်းခံမှုအား ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစံကျော်လှမှ သက်ဆိုင်ရာများနှင့် ဆက်သွယ်ညှိနိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီး အားပေးစကားပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
Posted on May 29, 2019 May 29, 2019 Author admin	31 Views
ပါတီစွဲ ကင်းရှင်းစွာ ရပ်တည်မည်ဟု ရခိုင်လွှတ်တော်ဥက္ကဌ ဦးစံကျော်လှ ပြောကြား
ယမန်နေ့ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၈ ရက်နေ့က ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥက္ကဌအဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက် ခံခဲ့ရတဲ့ ရခိုင်အမျိုးသားပါတီရဲ့ ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးစံကျော်လှက သူ့အနေနဲ့ ပါတီစွဲ စိတ်မထားဘဲ အဂတိတရား ကင်းရှင်းစွာ ရပ်တည်သွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း RiA ကို ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။“ကျွန်တော်က ပါတီမှာလည်း တာဝန်တစ်ခုရှိတယ်။ အခု လွှတ်တော်တာဝန်ကိုပါ ထမ်းဆောင်ပေးဖို့ အတွက် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ ကနေ ပေးအပ်တဲ့အတွက် နောက်ထပ် တာဝန်တစ်ခုကို ထမ်းဆောင်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်ကတော့ အဂတိတရားတွေကို ကင်းကင်း ရှင်းရှင်းဖြစ်အောင် ပြုလုပ်သွားမှာပါ။ ဘယ်ပါတီက တင်သွင်းတဲ့ အဆိုတွေမို့ ပိုပြီး အလေးသာစေမယ် ဆိုခြင်းထက် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွက် အမှန်တကယ်လိုအပ်တဲ့ အရာတွေကိုသာ ဦးစားပေးသွားမှာပါ” မနေ့က ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်
Posted on May 29, 2019 May 29, 2019 Author admin	26 Views
ဒုက္ခသည်ကူဖို့ ရခိုင်ပြည်နယ် လွှတ်တော်အတည်ပြု
ရခိုင်ပြည်နယ်က စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကို အကူအညီပေးဖို့ အရေးကြီးအဆိုကို ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှာ ဒီနေ့ အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအဆိုကို ကန့်ကွက်မယ့်သူမရှိတဲ့အတွက် အတည်ပြုကြောင်း ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဌ ဦးစံကျော်လှက ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ “ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း လက်ရှိဖြစ်ပွားလျှက်ရှိသော တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် AA တပ်နှင့် မြန်မာ့တပ်မတော် တို့၏ တိုက်ပွဲများကြောင့် နေရပ်စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးလာကြသော ဒေသခံဒုက္ခသည်များရဲ့ စားဝတ်နေရေးနဲ့ လူမှုကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများကို မိုးမတိုင်မီ ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ အမြန်ဆုံးအကူအညီပေးသင့်ကြောင်း တိုက်တွန်းသည့် အရေးတကြီးအဆိုအား ပြည်နယ်လွှတ်တော်က အတည်ပြုကြောင်း ကြေညာအပ်ပါတယ်” အဆိုအပေါ် ANP လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၅ ဦးက ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရ လုံခြုံရေး နဲ့ နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးထိန်လင်းက ဒုက္ခသည်တွေကို အကူအညီပေးဖို့အတွက် လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်တွေရဲ့ အကြံပြုချက်တွေကို အလေးအနက်ထားဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ တင်ပြခဲ့ပါတယ်။ “ကျနော်တို့အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ ကိုယ်စားလှယ်ကြီးများရဲ့ ဆွေးနွေးချက်များ ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်
Posted on May 29, 2019 May 29, 2019 Author admin	22 Views
ဘူးသီးတောင် မောင်တောဒေသ ခံတွေ နေရပ်စွန့်ခွာနေတာကို ကာကွယ်ဖို့ လွှတ်တော်ဥက္ကဌပြော
ဒုတိယအကြိမ် ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေးကို ဇွန်လ ၂၇ ရက်နေ့က ကျင်းပနေစဉ် ရခိုင်ပြည်နယ် ဘူးသီးတောင်နဲ့ မောင်တောဒေသခံတွေဟာ အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရတာကြောင့် နေရပ်စွန့်ခွာ မှုတွေရှိနေတာကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက် လွှတ်တေေ့ာ်နဲ့ အစိုးရ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ လိုအပ်ကြောင်း ရခိုင်ပြည် နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဌ ဦးစံကျော်လှက ဒီန ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့စတင်ကျင်းပတဲ့ ဒုတိယအကြိမ် ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး မိန့်ခွန်းမှာ ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ “အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ နေရပ်ကိုစွန့်ခွာနေရတာဖြစ်ပါတယ်၊ ပြည်သူတွေအတွက် ကျနော်တို့ကာကွယ်ပေးရပါမယ်၊ လွှတ်တော်ရော၊ အစိုးရပါ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ လိုပါတယ်” လွှတ်တော်နဲ့အစိုးရဆိုတာ အမြဲတမ်းသဟဇာတမဖြစ်နိုင်ပေမယ့် အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားနဲ့ နယ်မြေတည်တံ့ခိုင် မြဲရေးကိစ္စတွေမှာ တသားတည်းကျဖို့ လိုအပ်တယ်လို့လည်း လွှတ်တော်ဥက္ကဌက ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဘူးသီးတောင် မောင်တောဒေသမှာ နေထိုင်တဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေဟာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ပဋိပက္ခတွေနောက်ပိုင်း နေရပ်စွန့်ခွာမှုတွေရှိခဲ့ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်
Posted on May 29, 2019 May 29, 2019 Author admin	21 Views
ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့ ပြည်နယ်အစိုးရကို တိုက်တွန်း
ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဌ ဦးစံကျော်လှကို ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀ ရက်နေ့က ကျင်းပတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ် လွှတ်တော် အစည်းအဝေးမှာ တွေ့ရစဉ် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ရာမှာ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ တိုင်ပင်ညှိနှိုင်း ဆောင် ရွက်ကြဖို့ ရခိုင်ပြည်နယ် လွှတ်တော်ဥက္ကဌ ဦးစံကျော်လှ က ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲဲ့ကို ဒီနေ့ တိုက်တွန်းလိုက် ပါတယ်။ ဒီနေ့ စတင်ကျင်းပတဲ့ ဒုတိယအကြိမ် ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး ပထမနေ့မှာ ပြည်နယ် လွှတ်တော်ဥက္ကဌ ဦးစံကျော်လှက မိန့်ခွန်းပြောကြားရာမှာ တိုက်တွန်း ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ “အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့ အတတ် နိုင်ဆုံး ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးကြပါ၊ ကိုယ်စားလှယ်များအနေနဲ့လည်း မိမိတို့ဆောင်ရွက်မှုဟာ ဝင်ရောက်စွက် ဖက်သလို မဖြစ်ရအောင် ရှောင်ကြည်ဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်” လွှတ်တော်တွေရဲ့ သဘာဝအတိုင်း လွတ်လပ်စွာ သဘောထားကွဲလွဲတာတွေနဲ့ အမြင်မတူတာတွေ ရှိကြမှာဖြစ် ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်
နေပြည်တော် ဧပြီ ၃ ရခိုင်ပြည်နယ် တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအကောင်အထည်ဖော်ရေး ဗဟို ကော်မတီသည် ဒေသတွင်း ပြန်လည်နေရာချထား ရေးနှင့် လူမှုစီးပွားဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်း ကော်မတီ၏ အကောင်အထည်ဖော်မှုဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ် လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ယခုအခါ ဒေသတွင်းပြန်လည်နေရာချထားရေး လုပ်ငန်းကို စတင်အကောင်အထည်ဖော်ရန် စီစဉ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ဒေသတွင်းပြန်လည် နေရာချထားရေးနှင့် လူမှုစီးပွားဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်၏ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်မှာ အဓိကပါဝင်သော အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ် ပုဏ္ဏားကျွန်းစက်မှုဇုန်တွင် CMP အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ရန် အတွက် စီမံဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ကနဦးဆောင်ရွက် ချက်အနေဖြင့် စစ်တွေမြို့ ဆပ်ရိုးကျ ရပ်ကွက်တွင် အထည်ချုပ်စက်ရုံငယ်တစ်ခုကို တည်ထောင်ပြီး လုပ်ငန်းစတင် လည်ပတ်လျက်ရှိရာ ရခိုင်တိုင်းရင်းသူ အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းအင်အား တစ်ရာကျော် အလုပ်အကိုင်ရရှိလျက်ရှိသည်။ ရန်ကုန်မြို့နှင့် ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်
Posted on May 29, 2019 May 29, 2019 Author admin	17 Views
ရခိုင်ပြည်နယ် ဂွမြို့နယ်တွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မိတ်ဆက်ခြင်းအလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲကျင်ပ
(၁၈.၁.၂၀၁၈)ရက်နေ့ ရခိုင်ပြည်နယ် ဂွမြို့နယ်တွင် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနနှင့်ကမ္ဘာဘဏ်တို့ပူးပေါင်းအကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်သော လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်း အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ အခမ်း အနားအား ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့၊ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာချမ်းသာ မှအဖွင့်အမှာ စကား ပြေားကြားပြီးနောက် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန (ရုံးချုပ်) ဒုတိယညွှန်းကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကျော်စိုးနှင့် ကမ္ဘာဘဏ်ကိုယ်စာလှယ် Mr.Sean Lewis Bradley တို့မှ မိတ်ဆက်စကား ပြေားကြားခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန (ရုံးချုပ်) ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးလှခိုင်မှ စီမံကိန်းအကြောင်းအကျဉ်းချုပ် မိတ်ဆက်ရှင်းလင်းခြင်းနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန (ရုံးချုပ်) လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဝင်း​ဇော်ထွန်းမှ ကျေးရွာအဆင့်စီမံကိန်းစက်ဝန်းအား ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။ တက်ရောက်လာသူများ မှ စီမံကိန်းမကြောင်းသိရှိလိုသည်များ မေးမြန်းခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ နေပြည်တော်ကောင်စီဝင်အဆင့်(၁) ဦးအေးမြင့် နှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စာလှယ် ဦးမြင့်ဝေ တို့မှလည်း ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။အဆိုပါ ဆွေးနွေးပွဲသို့(၅၃၂)ဦး ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်
Posted on May 29, 2019 May 29, 2019 Author admin	34 Views
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်သင်တန်းဖွင့်ပွဲ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ဒုတိယနှစ်အဖြစ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး စေတုတ္တရာမြို့နယ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ် အမ်းမြို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး လေးမျက်နှာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ မှ တပ်ကုန်းမြို့နယ် တို့တွင် စတင်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင် ရွက်တော့မည်ဖြစ်ရာ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရေးလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ဒုတိယနှစ်အဖြစ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး စေတုတ္တရာမြို့နယ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ် အမ်းမြို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး လေးမျက်နှာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ မှ တပ်ကုန်းမြို့နယ် တို့တွင် စတင်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင် ရွက်တော့မည်ဖြစ်ရာ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်သင်တန်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို (၁၉-၁-၂၀၁၅) ရက်နေ့တွင် မွေးမြုရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန အစည်းဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ဆိုပါသင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီးများကြဖြစ်သော ဦးတင်ငွေ၊ ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်
Posted on May 29, 2019 May 29, 2019 Author admin	35 Views
ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း
ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့မှာ ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ ANP ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး၊ NLD ကိုယ်စားလှယ် ၁ဦး၊ ပညာရှင် ၃ ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းမှာဖြစ်ကြောင်း ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးညီပုက လွှတ်တော်ဉက္ကဌထံတွင် တင်သွင်းထားကြောင်း ဒီနေ့ကြေငြာလိုက်ပါသည်။
Posted on May 29, 2019 May 29, 2019 Author admin	36 Views